Ụbọchị My Pet » 6 Summer Ụbọchị mata echiche
Eme ka nke a n'oge okpomọkụ sizzle – anyị n'elu 6 ụbọchị echiche maka nke a oge!
1. -aga hiking
Sinụ n'ebe na-ahụ n'ebe ahu nile ị na a na pụtara ịhụ. Ọ bụghị nanị na research pụtara na hiking mma gị ahụ ike, ọ na-enye ohere na oge na ohere ka-esi amata gị ụbọchị. The ọzọ na-akpali ebe, na obere ihere silences ị ga- – dị ka e nwere ga-enwe mgbe nile ihe na-ekwurịta banyere!
2. See mgbatị ọnụ
Ma ị na-a mma ịnụbiga ọkụ n'obi ókè ma ọ bụ dị malite si, aga mgbatị bụ mgbe niile ọzọ fun na a mgbatị-enyi. Ị na gị ụbọchị nwere ike eme ihe dị ka ibe ọzụzụ, na ike gị buut mara ụlọikwuu abụọ. Ọ bụ n'ụzọ zuru okè na-akpali ike mpi n'etiti gị.
3. Gaa na a local Sporting omume
Gaa na a local game – ọnụ. Bụ'abụ on your otu na kenha ụfụfụ mkpịsị aka. Ida onwe unu na ikuku nke ìgwè mmadụ – ọ bụ ike ghara nwere fun mgbe na-eme na-efegharị efegharị! Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ike, ị nwere ike mgbe niile na-agbalị na-a ihunanya ozi na Jumbotron.
4. Campout abụọ
Ime ka ọtụtụ n'ime ndị na okpomọkụ mgbede. E nwere ihe a ọnụ ala, fun (na kpamkpam ihunanya) ụbọchị na-eche ziri ezi gị n'azụ ụlọ. Melite a tent, na-enwe a ihunanya ụbọchị abalị snuggling n'okpuru a jupụtara na kpakpando, n'oge okpomọkụ igwe!
5. Zoo Ụbọchị
A njem n'ogige ụmụ anụmanụ bụ n'aka na-esi mee ka nwa ewu na ị na a kee ihe ụbọchị echiche! Na ọtụtụ ụmụ anụmanụ na-ahụ, i nwere ike efegharị goodbye ka ọ bụla ihere silences. Nọgidenụ na-, -egosi gị ụbọchị dị nnọọ otú ọhịa banyere ha ị na-!
6. Berry buru
Summer bụ nke zuru okè oge iji nweta n'èzí ma bulie gị onwe gị na tomato, na ọ na-eme a mara mma fun na pụrụ iche ụbọchị echiche oke. Mgbe ahụ na-abịa n'ụlọ e mesịa na-atụgharị ndị tomato n'ime a ụtọ megharịa ọnụ na-emeso.